निषेधाज्ञाले मजदुरी छुटेपछि चेपाङलाई छाक टार्नै सकस- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
निषेधाज्ञाले मजदुरी छुटेपछि चेपाङलाई छाक टार्नै सकस
जेष्ठ २६, २०७८ प्रताप विष्ट
हेटौंडा — राक्सिराङ गाउँपालिका–८ पाम्बुङका ८ वर्षीय सुरेश चेपाङ बिहान सबेरै उठेर कन्दमूल खोज्न घरनजिकैको जंगल जान्छन् । घरमा बाबु छैनन् । आमाले भाइबहिनी हेर्नुपर्छ ।उनीचाहिँ आँखा मिच्दै जाबी भिरेर जंगलतिर लाग्छन् । उनका २ दुई बहिनी र दुई भाइ छन् ।
जंगलबाट टिपेर ल्याएको गिट्ठा पकाउने तयारी गर्दै राक्सिराङ गाउँपालिकाको चेपाङ परिवार ।
उनैले ल्याएको कन्दमूल र टाँकी उसिनेर आमा र भाइबहिनीले पेट भर्दै आएका छन् । सुरेश जंगलबाट फर्केपछि आमा देवीटारतिर काम खोज्न जान्छिन् । ज्यालाबनीको काम पाए बेलुकीका निम्ति पिठो किनेर ल्याउँछिन् । नत्र गिट्ठाकै भर । सुरेश पाम्बुङस्थित नवजीवन प्राविमा २ कक्षामा पढ्छन् । अहिले निषेधाज्ञाका कारण स्कुल बन्द छ । उनका बाबुको चिउरी टिप्न रुखमा चढ्दा लडेर दुई वर्षअघि मृत्यु भएको थियो । आफ्नो बारीको उत्पादनले तीन महिना पनि खान पुग्दैन ।
सुरेशका छिमेकी नानी चेपाङ र मैया चेपाङ पनि बिहान सधैं कन्दमूल खोज्न जंगल जान्छन् । नानी र मैयाँ स्थानीय विद्यालयमा एक कक्षामा अध्ययन गर्छन् । खुट्टामा चप्पल पनि छैन । कन्दमूल खोज्न जाँदा काँडा बिझ्छन् ।
पाम्बुङका मात्र होइन, पाङथलीका बालबालिका पनि कन्दमूल खोज्न जंगल जाने गरेका छन् । ‘जंगलबाट गिट्ठा, भ्याकुर, चुइया, टाँकीको साग नल्याए उनीहरुको छाक नै टर्दैन,’ पाङथलीस्थित प्राथमिक विद्यालयका प्रअ कविराज तितुङले भने, ‘स्कुलमा पढ्न आउने अधिकांश विद्यार्थी अहिले कन्दमूल खोज्न जंगलमा जाने गरेका छन् ।’
गत वर्ष रासायनिक मलको अभावमा अन्न उत्पादन नभएपछि हाहाकार भएको वडा सदस्य राजु चेपाङले बताए । ‘साना–ठूला, पढ्ने, नपढ्ने सबै अहिले जंगल गएर कन्दमूल खोजेर ल्याउने गरेका छन्,’ उनले भने ।
पाम्बुङ र पाङथलीमा ४५ घर चेपाङहरू छन् । सबैका घरमा खाद्यान्न अभाव छ । काम गर्न भरतपुर, हेटौंडा, मनहरी, लोथर गएकाहरू पनि निषेधाज्ञाले गर्दा घर फर्केका छन् । ‘सबैका घरमा खानेमुखहरू बढेको छ तर अन्नको दाना छैन,’ स्थानीय मंगलबहादुर चेपाङले भने, ‘ज्यालाबनी गर्ने ठाउँ सबै बन्द भएको छ, त्यसैले कन्दमूल खाएर पेट भर्दै आएका छौं ।’
यस वर्ष भोकमरीको समस्या झन् जटिल बनेको वडा सदस्य चेपाङले बताए । ‘गाउँको समस्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले जानकारी गराइसकेको छु, हेरौं कतैबाट सहयोग जुट्छ कि ?,’ उनले भने । आफ्नो उत्पादनले यस क्षेत्रका चेपाङ परिवारलाई वर्ष दिनमा ३ महिनामात्र खान पुग्छ । उनीहरू ९ महिना ज्यालामजदुरी गर्छन् । जंगली कन्दमूल खाएर प्राण धान्छन् ।
मनहरी बजारबाट ५ घण्टा हिँडेर पुगिने पाम्बुङ, पाङथली, देवीटार, मैसिराङमा खाद्यान्नको समस्या छ । ‘अहिले सिंगो राक्सिराङ गाउँपालिकामा खाद्यान्नको अभाव छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने, ‘एकातिर रोगले चपटेको छ, अर्कोतिर भोकमरी छ ।’
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले गाउँमै आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल निर्माण गरेको छ । अर्कातिर भोकमरी समस्या टार्न दाताहरुसँग खाद्यान्न सहयोगको निम्ति अनुरोध गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ १४:३३
लघु महाचिललाई कृत्रिम गुँड
जेष्ठ २६, २०७८ मनोज पौडेल
लुम्बिनी — विश्वमै दुर्लभ लघु महाचिललाई बचेरा हुर्काउन रुखमा कृत्रिम गुँड बनाएर छाडिएको छ । यो चराका ५० प्रतिशतभन्दा कम बचेरा मात्र हुर्किने हुँदा प्रजनन अवस्थामा सुधार ल्याउन गुँड निर्माण गरिएको हो । सिकारी चरा शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका डा. तुल्सी सुवेदी र चराविद् सन्देश गुरुङको टोलीले गुँड बनाएको हो ।
मुलुकका तीन ठाउँमा १३ गुँड बनाइएको छ । नेपालमै सबैभन्दा धेरै लघु महाचिल पाइने लुम्बिनी क्षेत्रमा प्राकृतिक वासस्थानमा गुँड बनाइएको छ । लुम्बिनीस्थित शान्ति स्तुपको दक्षिणतिर दुई, पिकनिक खाने क्षेत्रमा एक, ७ नम्बर गेटभित्र र तेलार नदीछेउ लुम्बिनी बुद्ध गार्डेन होटलभित्र एक–एक ठाउँमा गुँड बनाइएको छ । चार ठाउँमा सिसौ र एक ठाउँमा सिमलको रुखमा गुँड बनाइएको छ । यस्तै कोसी वन्यजन्तु आरक्षको भागवपुरमा पाँचवटा र धनुषाको धनुषाधाम सामुदायिक वनमा तीनवटा गुँड बनाइएको छ । एकान्तमा रहेका अग्ला रुखमा १८ देखि २० मिटरमाथि बनाइएको छ । नेपालमा लघु महाचिल ३० देखि ७० वटा रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये १६/१७ वटा लुम्बिनीमा छन् । मुलुकमै पहिलोपटक लघु महाचिलको प्रजनन अवस्थामा सुधार ल्याउन गुँड निर्माण गरी परीक्षण गरिएको हो ।
जुमार टेक्निकबाट शरीरलाई डोरीले बाँधेर चराविद् गुरुङ रुख चढ्छन् । एक मिटर डायमिटरको मसिनो काठको फ्रेमलाई रुखको माथिल्लो भागमा किलाकाँटीले ठोकेर गुँड राख्छन् । वाइन्डिङ वायरले बाँधेर बलियो बनाउँछन् । त्यसमाथि मसिनो झिजाझिजी र सुकेका काठपात राख्छन् । त्यसपछि हरियापात र घुरपात थपेर बाक्लो बनाउँछन् । कृत्रिम रूपमा बनाइए पनि प्राकृतिक रूपमा रहेजस्तो देखिने गरी गुँड निर्माण गरिएको चराविद् गुरुङले बताए । ‘एउटा गुँड राख्न झन्डै तीन घण्टा समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘हावाहुरीले नउडाउने गरी बलियो बनाएका छौं ।’ सकभर चराको मनोभावना बुझेर वातावरणमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको र चिललाई शंका नलागोस् भनेर धेरै प्रयत्न गरेको उनले बताए । साता दिन लगाएर लघु महाचिलको बढी मुभमेन्ट हुने ठाउँमा राखिएको छ । यसो गर्नुको कारण चिलले सजिलै गुँड देखेर ओथारो बसोस् भन्ने हो ।
मेदेखि अगस्टमा यसले गुँड बनाएर बचेर उडाउँछ । लघु महाचिल ३८ देखि ४२ दिन ओथारो बस्छ । बच्चा जन्मेको ५४ दिनपछि उडाएर लिएर जाने चराविद् सुवेदीले बताए । तीन ठाउँमा झन्डै एक महिना लगाएर गुँड राखिएको हो । यसको संख्या विश्वमै घट्दै गएकाले जोगाउन यस्तो प्रयत्न भएको हो । यसलाई बचेरा हुर्काउन निकै गाह्रो हुन्छ । ‘५० प्रतिशतभन्दा कममात्रै बचेरा हुर्केको पाइन्छ,’ चराविद् डा. हेमसागर बरालले भने, ‘यसको एउटा बच्चाले अर्को बच्चालाई खाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।’
१०/१२ दिन अन्तरमा दुईवटा बच्चा जन्मिए भने ठूलोले सानालाई खाने गरेको देखिएको छ । त्यसले पनि यसका बचेरा हुर्काउन समस्या आएको उनले सुनाए । अहिले गुँड आसपास पुगेर अध्ययनकर्ताले बेलाबेला अनुगमन गरिरहेका छन् । ६ महाचिलमध्ये अहिलेसम्म यसको अध्ययन भएको थिएन । गत वर्ष तीनवटा लघु महाचिलमा सोलार ट्रान्समिटर जडान गरेर अध्ययन गरिएको हो । अंग्रेजीमा इन्डियन स्पोटेड इगल भनिने यस चिलको रहनसहन र वासस्थान अध्यनन गर्न सोलार ट्रान्समिटर राखिएको थियो । ‘अध्ययनले लघु महाचिलको संरक्षण योजना बनाउन सहज भयो,’ चराविद् बरालले भने, ‘त्यसकारण प्रजनन अवस्थामा सुधार ल्याउन अध्ययन थालेको हो ।’
लघु महाचिल तराईको रैथाने चरा हो । ६ महाचिलमध्ये यसले मात्र तराईमा बच्चा कोरल्छ । एकदेखि पाँच किलोसम्म तौल हुने यो उत्तिकै मनमोहक र आकर्षक देखिन्छ । त्यसै कारण धेरैले मन पराउँछन् । ‘पहिलो अध्ययनले कहाँ कहाँ पुग्छन्, के गर्छन् र बच्चा कसरी कोरल्छन्लगायतका कुरा थाहा पाउन सघायो,’ बरालले भने, ‘त्यस्तै अहिले बचेरा हुर्काउने विषयमा अध्ययन थाल्यौं ।’
बरालका अनुसार यो कृषकको राम्रो साथी हो । यसले बालीनाली उत्पादनलाई निकै सहयोग गर्छ । यसले बालीनाली नाश गर्ने सुगा, भँगेरा र पानीचरालगायतको सिकार गर्छ । यी तीनै जीवको प्रमुख आहार खाद्यान्न बाली हो । त्यसैले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा कृषकलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । मांसाहारी सिकारी चरा लघु महाचिलको विनाश हँुदा मानव जातिलाई समेत असर गर्ने चराविज्ञहरू बताउँछन् ।
चिलका २२ प्रजाति छन् । तीमध्ये नेपालमा जीवाहार, गोमायु, राज, रणमत्त, सुपर्ण र लघु महाचिल गरी ६ प्रजातिका पाइन्छन् । महाचिलमध्ये यो सबैभन्दा सानो हो । लघु महाचिलसहितका यी ६ प्रजातिका चिल आईयूसीएनको रेडलिस्टमा लोपोन्मुख संकटापन्न चराको सूचीमा छन् । नेपालमा सबैभन्दा कम राज महाचिल छन् । तिनको संख्या करिब १० मात्र रहेको अनुमान छ । त्यसपछि रणमत्त महाचिल १० देखि ३५ र जीवाहार महाचिल २० देखि सयको संख्यामा रहेको अनुमान गरिएको छ । सुपर्ण महाचिल सयदेखि दुई सय र गोमायु महाचिल १० हजारदेखि २० हजारको संख्यामा रहेको अनुमान छ ।
आहारा विनाशका कारण लघु महाचिल दिनानुदिन संकटमा पर्दै गएको चराविद् डा. सुवेदीले बताए । जमिन खण्डीकरण, वन विनाश र बढ्दो विषादी प्रयोग लघु महाचिलको वासस्थानमै हराउँदै गएको उनले बताए । यी चरा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बस्ती र खेतबारीमा बस्छन् । खेतका भ्यागुता खान्छन् । भ्यागुताले खेतबारीमा विषादी खाँदा त्यसको असर यसलाई परिरहेको छ । ‘खुला स्थानमा कावा खाँदै चिल रम्न चाहन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘तर, अग्लाअग्ला मानव बस्तीको घना विकासले यसलाई समस्या थपेको छ ।’ त्यसले गर्दा आफूलाई पायकको स्थान खोजीमा वासस्थान फेर्ने वा हराउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘यो जलवायु परिवर्तनको सूचक पनि हो,’ उनले भने, ‘वातावरणसँगै आफ्ना गतिविधिमा परिवर्तन ल्याउँछ ।’ यो महाचिल भारत, पाकिस्तान, भियतनाम, बंगलादेश, म्यानमार, कम्बोडिया र नेपालमा मात्र पाइएको रेकर्ड छ । विश्वमा यसको संख्या २ हजार ५ सयदेखि १० हजारको हाराहारीमा छ । रुफोर्ड स्मल ग्रान्ट र हिमाली प्रकृतिले यसको अध्ययन गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ १४:२९